Ubeka iliso njani kwimidiya yokuncokola? | Martech Zone
Ubeka iliso njani kwimidiya yokuncokola?
NgoMvulo, Februwari 21, 2011 NgeCawa, Oktobha 4, 2015 Douglas Karr
Nokuba uza kuthatha inxaxheba okanye akunjalo, kukho izizathu ezininzi zokubeka iliso kwimidiya yoluntu kuwo onke amashishini kule mihla:
Ukubeka iliso kumzi mveliso wakho kunokukunceda wena kunye nabasebenzi bakho ukuba nifumane ubungcali.
Ukubeka esweni abo ukhuphisana nabo kunokukunceda uqulunqe ukhuphiswano lobukrelekrele kwaye kukuncede uhlukanise ishishini lakho okanye imveliso.
Ukubeka iliso kunokukunceda uchonge iinkokeli kunye neendawo ezinegunya nefuthe kumzi mveliso wakho.
Ukubeka iliso kunokukunceda ufumane imicimbi efanelekileyo ukuze uthathe inxaxheba kuyo (ukuya okanye ukuthetha).
Ewe kunjalo, ukubeka esweni kuya kukunceda ufumane ukukhankanywa kweshishini lakho ukuvavanya uluvo, ukukhuthaza ubungqina babathengi / ukukhankanywa.
Ukubeka iliso kuya kukunceda uchonge imiba yenkonzo yabathengi ukuze uyisombulule esidlangalaleni - okanye ikunike ulwazi oludingayo ukuze uphucule iimveliso okanye inkonzo yakho.
Ukubeka iliso kuya kukubonelela ngamathuba okongeza ixabiso kwiincoko.
DK New Media isungule eyayo inkonzo yokuJonga iMithombo yeendaba yoLuntu kubaxumi bayo njengexabiso elongezayo kubudlelwane bethu obukhoyo. Ukuba unomdla wokunika uvavanyo-lokuqhuba, nceda undazise. Siza kubonelela ngenkonzo nge- $ 499 ngonyaka kwinkampani nganye (ukuya kuthi ga kwi-5 yokungena) abangabathengi bethu.
Ndinengxaki yokufumana abaphumeleleyo kwi- $ 10,000 yokunikezelwa kwethu… kubonakala ngathi abantu baxakeke kakhulu kukufunda ii-imeyile ukuze baziphendule! Ke-siza kwenza izinto ezahlukileyo ukunika izixhobo zethu! IVontoo yi inkonzo yemiyalezo yelizwi eya kukuvumela ukuba urekhode ngokuzenzekelayo kwaye uthumele izikhumbuzo, izaziso zokuqokelela, kubathengi bakho. Abantu bokuqala aba-2 abanokufumana le nkonzo iluncedo baya kuphumelela iakhawunti yokuthengisa ngelizwi !!! Phendula kule imeyile ngeVontoo! kwisihloko esikhulu kwaye usixelele ukuba uza kusisebenzisa njani isicelo -Siza kuvumela abantu baseVontoo ukuba bakhethe abaphumeleleyo.
I-PPC xa ithelekiswa ne-SEO: I-spy vs Spy